Rivo-Doza ‘Manuel’ Manafo-Drano An’i Acapulco · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 22 Septambra 2013 14:16 GMT
Vakio amin'ny teny English, বাংলা, עברית, Español
Nataon'ny rivo-doza Manuel safo-drano sy mitoka-monina tanteraka ny seranana manan-tantaran'i Acapulco sy ny ampahany betsaka amin'ny fanjakan'i Guerrero.
Fanamafisana amin'ny minitra farany. Ho maimaim-poana ny alin'ny Alatsinainy any Acapullco ho an'ireo mpizaha tany, araka ny fanamafisana nataon'i @peraltanet71, Sekretera Monisipalin'ny Fizahan-tany.
Ny sasany indray dia te-hampiseho tsotra izao amin'izao tontolo izao ny faharavana navelan'i “Manuel”, tsy ao Acapulco irery ihany fa amin'ny fanjakan'i Guerrero [es] manontolo mihitsy.
Ho tena lava ny alina ho an'ny olona sasany @lopezdoriga ny herin'ny natiora
Zarain'i Freesiithaww Hdezzs ao amin'ny YouTube ity lahatsary manaraka avy any Acapulco ity:
Mizara sary maro momba ny faritra ny Televisa [es].
Manangona ireo tatitra mikasika ny olona tsy hita sy hita any Acapulco ny bilaogy Acapulco Busca .